G20 oo ka hadlaya canshuuraha caalamiga - BBC Somali - Ganacsi
G20 oo ka hadlaya canshuuraha caalamiga
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 16 Febraayo, 2013, 18:25 GMT 21:25 SGA
Waddamada G20 ee ugu dhaqaalaha wayn ayaa ku kulmaya magaalada Moscow.
Wasiirada maaliyada ee dalalka G20 ee ugu dhaqaalaha wayn adduunka ayaa ku kulmaya magaalada Moscow si ay uga hadlaan in isbadalo lagu sameeynayo sharciga caalamiga ee u ogolaanaya shirkadaha inay canshuurta ay bixiyaan yareeyaan.
Sharciga hadda ayaa u ogolaanaya in shirkadaha caalamiga inay faa'iidadooda u wareejiyaan dalalka ay canshuurta la bixiyo yar tahay, si aysan canshuur u bixin dalalka kale ee canshuurtooda badan tahay.
Britain, Jarmalka, iyo Faransiiska ayaa hogaaminaya dadaal la doonayo in lagu joojiyo shirkadaha caalamiga ee canshuuraha aan bixin.
Warbixin cusub oo ay soo saari doonaan Ururka Iskaashiga dhaqaalaha iyo Horumarka (OECD) ayaa ka hadli doonta in loo baahan yahay isbadal sharciyada canshuuraha.
Shirkan ayaa yimid iyadoo dooda canshuurta aan la bixin ay sii badatay, Dalkan Britain kadib markii ay soo baxday shirkadaha waawayn ee Google, Amazon iyo Starbucks inay ka bixinayeen canshuur aad u yar faa'iidada ay ka sameeyeen Britain.